G-Force (2009) | MM Movie Store
ပရိသတျကွီးကို စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပွီး အပနျးလညျးပွစေမေယျ့ comedy/family film လေးတဈခုတဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ပူးလေးတှကေို ခဈြတတျသူဆိုရငျလညျး ဒီကားလေးကို လကျမလှတျသငျ့ပါဘူးနျော
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ဒါဝငျ၊ အောရကျဈ၊ ဘလကျစတာနဲ့ စပါ့ကယျလျတို့ဟာ စနဈတကြ လကေ့ငျြ့ပေးထားတဲ့ ပူးလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကို ထိနျးကြောငျးပေးသူကတော့ ဘနျပေါ့။သူတို့အဖှဲ့ကို G-Force လို့ချေါပွီး သူတို့ဟာ အစိုးရဘကျက လိုကျနတေဲ့အမှုကွီးတဈခုမှာ ပါဝငျအားဖွညျ့စုံစမျးရတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ စုံစမျးမှုမှာ အလှဲလေးဖွဈသှားပွီး အစိုးရက G-Forceကို ထပျပွီးမထောကျပံလှတျအောငျပွေးပွီး ဆိုလာရုံမက ဒါဝငျတို့ကိုပါ ထိနျးခြုပျဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျဒီလိုနဲ့ ဒါဝငျတို့ လေးကောငျလညျး ရနျသူတှလေကျက လှတျအောငျပွေးပွီး သူတို့ စုံစမျးခဲ့တဲ့ အမှုက မမှားကွောငျး သကျသပွေနျပွဖို့ ကွိုးစားကွပါတော့တယျ ….
အစိုးရကရော ဘာအမှုကို လိုကျနတောလဲG-Force အဖှဲ့ကရော သူတို့မှနျကနျကွောငျး ဘယျလိုလဲ သကျသတှေပွေကွဦးမှာလဲ …..ဟာသလေးတှနှေောပွီး စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာမလို့ ကွညျ့ရှူကွဖို့တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ
ပရိသတ်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး အပန်းလည်းပြေစေမယ့် comedy/family film လေးတစ်ခုတဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပူးလေးတွေကို ချစ်တတ်သူဆိုရင်လည်း ဒီကားလေးကို လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးနော်
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ဒါဝင်၊ အောရက်စ်၊ ဘလက်စတာနဲ့ စပါ့ကယ်လ်တို့ဟာ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ပူးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ထိန်းကျောင်းပေးသူကတော့ ဘန်ပေါ့။သူတို့အဖွဲ့ကို G-Force လို့ခေါ်ပြီး သူတို့ဟာ အစိုးရဘက်က လိုက်နေတဲ့အမှုကြီးတစ်ခုမှာ ပါဝင်အားဖြည့်စုံစမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စုံစမ်းမှုမှာ အလွဲလေးဖြစ်သွားပြီး အစိုးရက G-Forceကို ထပ်ပြီးမထောက်ပံလွတ်အောင်ပြေးပြီး ဆိုလာရုံမက ဒါဝင်တို့ကိုပါ ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ ဒါဝင်တို့ လေးကောင်လည်း ရန်သူတွေလက်က လွတ်အောင်ပြေးပြီး သူတို့ စုံစမ်းခဲ့တဲ့ အမှုက မမှားကြောင်း သက်သေပြန်ပြဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တယ် ….
အစိုးရကရော ဘာအမှုကို လိုက်နေတာလဲG-Force အဖွဲ့ကရော သူတို့မှန်ကန်ကြောင်း ဘယ်လိုလဲ သက်သေတွေပြကြဦးမှာလဲ …..ဟာသလေးတွေနှောပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမလို့ ကြည့်ရှူကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်
The Magicians – Season2(Episode 4)